Sawir Element5 Digital on Kala bixi
Mu'asasada McKnight waxay ku biirtay bulshada samafalka ee Minnesota, oo ay hogaaminayaan Golaha aasaaska ee Minnesota, si ay u soo saaraan waxyaabaha soo socda bayaanka.
Iyada oo ay jirto masiibo caalami ah oo aan horay loo arag, iyo kala-qaybin ku hanjabay in ay ku jeexjeexayaan qaab-dhismeedkeenna bulsheed, waxaan la kulannaa mid ka mid ah doorashooyinka ugu caansan ee jiilkan.
Bulshada samafalka ee Minnesota, oo lashaqeysa waaxda aan macaash doonka ahayn, waxay leedahay balanqaad dheer oo dimoqraadiyad xoog leh oo loo dhan yahay-dimuqraadiyad halkaas oo qof walba lagu tiriyo, la maqlo, la arko, la qiimeeyo, lana matalo. Muddo tobanaan sano ah waaxda madaniga ah waxay ahayd cod lagu kalsoonaan karo oo aan xisbi ku dhisnayn oo dhiirrigelinaya ka-qaybgalka bulshada. Sanadka 2020, tani waa muhiim sidii hore. Haddaan nahay hoggaamiyeyaasha samafalka ee aan xisbiyada ka tirsaneyn, waxaan ugu baaqeynaa ganacsatada, dowladda, aasaaska, kuwa aan macaash doonka ahayn, hoggaamiyeyaasha bulshada, iyo dadka deegaanka inay si wadajir ah ugu soo biiraan ilaalinta daacadnimada doorashadan-iyo in la ilaaliyo dimuqraadiyadda lafteeda.
Cod kasta waa la tiriyaa
Waxaan ku dhiirigelinaynaa codbixiye kasta oo u qalma inuu ku dhaqmo xuquuqdiisa Dastuuriga ah ee uu ku dhiiban karo codkiisa. Kani waa dimuqraadiyaddeenna - waan ognahay in cod kastaa muhiim yahay, waana inaan hubinno in cod kasta la tiriyo. Waxaan ku faraxsanahay in gobolkeennu uu bixiyo fursado badan oo codbixin hore ah. Hadday ku codeyneyso boostada, qof ahaanta hore, ama goobaha codbixinta ee Maalinta Doorashada, nidaamka doorashada Minnesota ayaa taariikh ahaan lagu caddeeyay in si feker ahaan loo qaabeeyay, loo taxaddaray si taxaddar leh, loona sugay. Dad badan oo reer Minnesota ah ayaa si guul leh ugu codeeyay boostada muddo tobanaan sano ah, taas oo ka dhigaysa nidaamyada doorashooyinka Minnesota inay diyaar u noqdaan baahiyaha gaarka ah ee sanadkan. Codbixiyayaashu waxay ka heli karaan xulashooyin ay ku ridi karaan oo ay kala socon karaan codkooda mnvotes.org.
Dimoqraadiyadu waxay ubaahan kartaa dulqaad sanadkaan
Sababtoo ah tirada badan ee waraaqaha maqnaashaha, natiijooyinka lama ogaan karo illaa iyo inta ka dambeysa Maalinta Doorashada. Tani waxay calaamad u tahay in dimuqraadiyadeenu shaqeyneyso, cod walbana waa la tirinayaa. Aynu ballanqaadno samir inta ay saraakiisha doorashada fulinayaan waajibaadkooda si loo hubiyo natiijo sax ah. Dimuqraadiyadeena ayaa mudan in la sugo.
Baaq nabadeed, midnimo, iyo bogsiin
Waxaan taageereynaa qiyamka geeddi-socodka doorashooyinka xalaal ah oo loo dhan yahay iyo caadooyinka dimuqraadiga ah ee aan xisbiyada lahayn ee ku-meelgaarka ah ee ku-meelgaarka siyaasadeed. Doorashada ka dib, waa in aan isu nimaadno kala duwanaanshaheenna si aan u sii wadno shaqada socota ee "sameynta midow kaamil ah" iyo hagaajinta dimoqraadiyaddayada danta guud. Kaliya markaan isu nimaadno ayaan adkeyn karnaa dimuqraadiyadda aan ku tiirsan nahay si aan uhorumarino barwaaqada iyo sinnaanta gobolka Minnesota.